FIFA The Best ဆုပေးပွဲ မတက်ခဲ့လို့ မက်ဆီနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို ဝေဖန်ခံနေရပြီ
ထိပ်ဆုံးနေရာက ဖယ်ပေးလိုက်ရရင် လက်ခုပ်တီးပြီး ကြိုဆိုတတ်ပါစေ
25 Sep 2018 . 4:50 PM
လူဆိုတဲ့ အမျိုးက ထိပ်ဆုံးနေရာကို တက်လှမ်းချင်ကြတယ်၊ သူ့ထက် ငါ လူဇော်ဖြစ်ချင်ကြတာက ထုံးစံပဲ။ ထိပ်ဆုံးနေရာကို ရောက်ဖို့ အားကုန်ထုတ် ကြိုးစားခဲ့ရသလို၊ ထိပ်ဆုံးနေရာရောက်ရင်လည်း အဲဒီနေရာမှာ တည်မြဲအောင် ကြိုးစားရပြန်တယ်။ ဒီကန့်သတ်ချက်ထဲမှာ ကွဲပြားသွားတာက တချို့လူတွေက ထိပ်ဆုံးနေရာ ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ဂုဏ်ပြုလက်ခုပ်သံတွေကို ခံယူခဲ့သလို ထိပ်ဆုံးနေရာက ဖယ်ပေးလိုက်ရရင်လည်း သူ့ထက်သာတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လက်ခုပ်တီးကြိုဆိုဖို့ ၀န်မလေးတတ်ပါဘူး။ တချို့ကျတော့လည်း ထိပ်ဆုံးနေရာကနေ ဖယ်ပေးလိုက်ရရင် အဲဒါကို အလွယ်တကူ လက်မခံဘဲ ကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူ တစ်ယောက်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုဖို့ တုန့်ဆိုင်းနေတတ်တယ်။
အခုလို အစပျိုးနေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းက FIFA The Best ဆု ပေးပွဲအခမ်းအနားကို မတက်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီ Messi နဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo တို့ကို အဓိက ပြောချင်လို့ပါ။ သူတို့နှစ်ယောက် လက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမား နှစ်ယောက်၊ ကျန်တဲ့ ကစားသမားတွေအတွက် စံပြထားရမယ့်သူတွေ။ ဒါပေမဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအမြင့်ဆုံးလို့ ဆိုရမယ့် FIFA The Best ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ မတက်ခဲ့တာကတော့ အရမ်း အရုပ်ဆိုးလွန်းတယ်။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်က FIFA အတွက် မျက်နှာပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ရသလို FIFA ကို မလေးစားရာလည်း ရောက်တယ်။ နောက်ပြီး ဆုရတဲ့ကစားသမားကိုလည်း အသိအမှတ် မပြုသလိုဖြစ်သွားတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုသတိထားမိတာက FIFA The Best ဆုဟာ အခမ်းအနား မတိုင်ခင်ကတည်းက ဆုရမယ့်သူ ဘယ်သူဆိုတာ ကြိုတင်ပေါက်ကြားနေပြီသလားလို့ပါ။ မနေ့က သတင်းတစ်ပုဒ်တက်ခဲ့တယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဒီဆုပေးပွဲကို တက်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ သူ ဆုမရရင် ပွဲတက်လေ့မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ UEFA ဥရောပ အကောင်းဆုံးဆုပေးပွဲကိုလည်း စီရော်နယ်လ်ဒို မတက်ပါဘူး။ မက်ဆီကတော့ များသောအားဖြင့် ဆုရရ၊ မရရ ဆုပေးပွဲတွေကို တက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ မထင်မှတ်လောက်အောင်ဘဲ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားနှစ်ယောက်စလုံး ဆုပေးပွဲ မတက်ခဲ့ပါဘူး။
ဆုပေးပွဲမှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး (၁၁)ဦးစာရင်းကို ကြေညာပြီး ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ကစားသမားတွေကို ဆုပေးချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီ မပါတော့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Idris Elba က အခုလို အရွှန်းဖောက်ခဲ့တယ်။ ” စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီက လွဲပြီး ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေတော့ အစုံအလင်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ သိတဲ့ကစားသမားတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး”
FIFA The Best ဆုပေးပွဲ မတက်ခဲ့လို့ ဘောလုံးလောကရဲ့ နာမည်ကြီး နည်းပြတွေ၊ ဂန္ထ၀င်ကစားသမားတွေက အစ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီကို ဝေဖန်ပြစ်တင်နေကြပြီ။ သူတို့နှစ်ဦး ဘာလို့ ဒီဆုပေးပွဲကို မတက်တာလည်းဆိုတော့ ကာယကံရှင်တွေပဲ သိမှာပါ။ မက်ဆီနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ဆိုတာက ဘောလုံးလောကရဲ့ လေးစားလောက်တဲ့ Figure တွေဖြစ်ပြီး သူတို့လို ကွင်းတွင်းကွင်းပြင်မှာ အောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့ ဘောလုံးသမားဆိုတာက လက်ချိုးရေလို့ ရတယ်။ အခုအချိန်မှာ မီဒီယာတွေက ဘောလုံးလောကကို မက်ဆီနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ လွှမ်းမိုးနေမှုက အဆုံးသတ်သွားပြီးလို့ ခန့်မှန်းနေကြပြီ။ အတက်ရှိရင် အကျရှိမယ်၊ အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရင် ပြန်ကျမယ်ဆိုတာက လောကရဲ့ ဘယ်တော့မပြောင်းလဲမယ့် နိယာမတရားပဲ။ ဒီသဘောတရားတွေကို စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီ လက်ခံနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထိပ်ဆုံးနေရာက ဖယ်ပေးလိုက်ရရင် လက်ခုပ်တီးပြီး ကြိုဆိုတတ်ပါစေ . . .
Photo:The Independent,Bljesak.info,goal,Stadium Astro
ထိပျဆုံးနရောက ဖယျပေးလိုကျရရငျ လကျခုပျတီးပွီး ကွိုဆိုတတျပါစေ
လူဆိုတဲ့ အမြိုးက ထိပျဆုံးနရောကို တကျလှမျးခငျြကွတယျ၊ သူ့ထကျ ငါ လူဇျောဖွဈခငျြကွတာက ထုံးစံပဲ။ ထိပျဆုံးနရောကို ရောကျဖို့ အားကုနျထုတျ ကွိုးစားခဲ့ရသလို၊ ထိပျဆုံးနရောရောကျရငျလညျး အဲဒီနရောမှာ တညျမွဲအောငျ ကွိုးစားရပွနျတယျ။ ဒီကနျ့သတျခကျြထဲမှာ ကှဲပွားသှားတာက တခြို့လူတှကေ ထိပျဆုံးနရော ရောကျတဲ့အခြိနျမှာ ဂုဏျပွုလကျခုပျသံတှကေို ခံယူခဲ့သလို ထိပျဆုံးနရောက ဖယျပေးလိုကျရရငျလညျး သူ့ထကျသာတဲ့ လူတဈယောကျကို လကျခုပျတီးကွိုဆိုဖို့ ဝနျမလေးတတျပါဘူး။ တခြို့ကတြော့လညျး ထိပျဆုံးနရောကနေ ဖယျပေးလိုကျရရငျ အဲဒါကို အလှယျတကူ လကျမခံဘဲ ကိုယျ့ထကျသာတဲ့သူ တဈယောကျကို လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ ကွိုဆိုဖို့ တုနျ့ဆိုငျးနတေတျတယျ။
အခုလို အစပြိုးနရေတဲ့ အဓိက အကွောငျးရငျးက FIFA The Best ဆု ပေးပှဲအခမျးအနားကို မတကျခဲ့တဲ့ မကျဆီ Messi နဲ့ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo တို့ကို အဓိက ပွောခငျြလို့ပါ။ သူတို့နှဈယောကျ လကျရှိဘောလုံးလောကရဲ့ အကောငျးဆုံးကစားသမား နှဈယောကျ၊ ကနျြတဲ့ ကစားသမားတှအေတှကျ စံပွထားရမယျ့သူတှေ။ ဒါပမေဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာအမွငျ့ဆုံးလို့ ဆိုရမယျ့ FIFA The Best ဆုပေးပှဲ အခမျးအနားကို ခိုငျလုံတဲ့အကွောငျးပွခကျြ မရှိဘဲ မတကျခဲ့တာကတော့ အရမျး အရုပျဆိုးလှနျးတယျ။ သူတို့ရဲ့ လုပျရပျက FIFA အတှကျ မကျြနှာပကျြစရာဖွဈခဲ့ရသလို FIFA ကို မလေးစားရာလညျး ရောကျတယျ။ နောကျပွီး ဆုရတဲ့ကစားသမားကိုလညျး အသိအမှတျ မပွုသလိုဖွဈသှားတယျ။
ဒီနရောမှာ တဈခုသတိထားမိတာက FIFA The Best ဆုဟာ အခမျးအနား မတိုငျခငျကတညျးက ဆုရမယျ့သူ ဘယျသူဆိုတာ ကွိုတငျပေါကျကွားနပွေီသလားလို့ပါ။ မနကေ့ သတငျးတဈပုဒျတကျခဲ့တယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ဒီဆုပေးပှဲကို တကျမှာ မဟုတျဘူး၊ သူ ဆုမရရငျ ပှဲတကျလမေ့ရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့ UEFA ဥရောပ အကောငျးဆုံးဆုပေးပှဲကိုလညျး စီရျောနယျလျဒို မတကျပါဘူး။ မကျဆီကတော့ မြားသောအားဖွငျ့ ဆုရရ၊ မရရ ဆုပေးပှဲတှကေို တကျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီနှဈမှာတော့ မထငျမှတျလောကျအောငျဘဲ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကစားသမားနှဈယောကျစလုံး ဆုပေးပှဲ မတကျခဲ့ပါဘူး။
ဆုပေးပှဲမှာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး (၁၁)ဦးစာရငျးကို ကွညောပွီး ရှေးခယျြခံရတဲ့ ကစားသမားတှကေို ဆုပေးခြိနျမှာ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မကျဆီ မပါတော့ အစီအစဉျတငျဆကျသူ Idris Elba က အခုလို အရှနျးဖောကျခဲ့တယျ။ ” စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မကျဆီက လှဲပွီး ကနျြတဲ့ကစားသမားတှတေော့ အစုံအလငျပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့နှဈယောကျကလညျး ကြှနျတျောတို့ သိတဲ့ကစားသမားတှတေော့ မဟုတျပါဘူး”
FIFA The Best ဆုပေးပှဲ မတကျခဲ့လို့ ဘောလုံးလောကရဲ့ နာမညျကွီး နညျးပွတှေ၊ ဂန်ထဝငျကစားသမားတှကေ အစ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မကျဆီကို ဝဖေနျပွဈတငျနကွေပွီ။ သူတို့နှဈဦး ဘာလို့ ဒီဆုပေးပှဲကို မတကျတာလညျးဆိုတော့ ကာယကံရှငျတှပေဲ သိမှာပါ။ မကျဆီနဲ့ စီရျောနယျလျဒိုတို့ဆိုတာက ဘောလုံးလောကရဲ့ လေးစားလောကျတဲ့ Figure တှဖွေဈပွီး သူတို့လို ကှငျးတှငျးကှငျးပွငျမှာ အောငျမွငျထငျရှားတဲ့ ဘောလုံးသမားဆိုတာက လကျခြိုးရလေို့ ရတယျ။ အခုအခြိနျမှာ မီဒီယာတှကေ ဘောလုံးလောကကို မကျဆီနဲ့ စီရျောနယျလျဒိုတို့ လှမျးမိုးနမှေုက အဆုံးသတျသှားပွီးလို့ ခနျ့မှနျးနကွေပွီ။ အတကျရှိရငျ အကရြှိမယျ၊ အမွငျ့ဆုံးကို ရောကျရငျ ပွနျကမြယျဆိုတာက လောကရဲ့ ဘယျတော့မပွောငျးလဲမယျ့ နိယာမတရားပဲ။ ဒီသဘောတရားတှကေို စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မကျဆီ လကျခံနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ထိပျဆုံးနရောက ဖယျပေးလိုကျရရငျ လကျခုပျတီးပွီး ကွိုဆိုတတျပါစေ . . .